नेपालको शास्त्रीय संगीतले कति प्रभाव पार्छ ? « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
नेपालको शास्त्रीय संगीतले कति प्रभाव पार्छ ?
संगीत मान्छेको जीवनको लागि उपयोगी छ कि घातक छ ? सैलुन, वर्कसप, विभिन्न फर्निचरका पसलहरुमा जाँदा ठूलाठूला स्वरमा गीत बजाएर काममा रमाएकाहरु देख्दा धेरैलाई संगीतसँगै काम गर्दा यसको उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ कि ? भन्ने सोचाइ पनि आउन सक्छ । तर संगीतले के मान्छेको कार्यक्षमता र सिर्जनशीलतामा सहयोग पुर्‍याउँछ ?
प्रकाशित मिति : मंसिर ११, २०७७ बिहीबार २ : ४६ बजे